Vaovao - Ny taratasin-trano sy ny vokatra ara-pahasalamana any Shina dia manafatra sy manondrana amin'ny taona 2020
Taratasy ao an-trano
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, ny haben'ny fanafarana ny tsenan-taratasy ao an-tokatrano ao Shina dia nitohy nihena hatrany. Amin'ny taona 2020 dia 27 700 taonina monja ny habetsahan'ny fanafarana isan-taona ao an-trano, fihenan'ny 12,67% hatramin'ny taona 2019. Ny fitomboana mitombo, ny karazana vokatra mihamaro, dia afaka nahafeno tanteraka ny filan'ny mpanjifa, hitohy ny fanafarana taratasy ao an-trano mitazona ambaratonga ambany.
Anisan'ny taratasy an-trano nohafarana, mbola manjaka ny taratasy manta, mitontaly 74,44%. Na izany aza, kely ny totalin'ny importa, ary kely ny fiantraikany amin'ny tsena anatiny.
Ny valanaretina pnemonia miandoha tampoka tamin'ny taona 2020 dia nisy fiatraikany lehibe tamin'ny lafim-piainana rehetra manerantany. Ny fitomboan'ny fahatsiarovan-tena momba ny fahadiovan'ny mpanjifa sy ny fiarovana dia nampiroborobo ny fiakaran'ny vokatra fanadiovana isan'andro, ao anatin'izany ny taratasim-pianakaviana, izay hita taratra ihany koa amin'ny taratasim-panjakana Import sy ny varotra fanondranana. Ny statistika dia mampiseho fa ny fanondranan-taratasy an-trano any Sina amin'ny taona 2020 dia 865.700 taonina, fitomboana 11,12% isan-taona; na izany aza, ny sandan'ny fanondranana dia 2.25567 tapitrisa USD, fihenan'ny 13,30% raha oharina tamin'ny taona lasa. Ny fanondranana ankapobeny ny vokatra an-taratasim-pianakaviana dia nampiseho fironana ny fitomboan'ny habetsany sy ny fihenan'ny vidiny, ary ny salan'isan'ny vidin'ny fanondranana dia nihena 21,97% raha oharina tamin'ny 2019.
Tao anatin'ireo taratasim-panjakana naondrana dia nitombo be ny vokatra fanondranana taratasy fototra sy ny taratasy fidiovana. Ny haben'ny fanondranana taratasy fototra dia nitombo 19,55 isan-jato nanomboka tamin'ny taona 2019 hatramin'ny 232.680 taonina, ary ny habetsaky ny fanondranana taratasy fidiovana dia nitombo 22,41% ka hatramin'ny 333,470 taonina. Ny taratasy manta dia nitentina 26,88% tamin'ny fanondranana taratasy an-trano, fiakarana isa 1,9 isan-jato avy amin'ny 24,98% tamin'ny taona 2019. Ny fanondranana taratasy ho an'ny trano fidiovana dia mitentina 38,52%, fiakarana 3,55 isan-jato isan-jato avy 34,97% tamin'ny taona 2019. Ny antony mety dia satria ny fiantraikan'ilay valanaretina, ny fividianana taratasy fidiovana tany amin'ny firenena vahiny tao anatin'ny fotoana fohy dia nahatonga ny fanondranana ny vokatra taratasy sy ny taratasy fidiovana, raha ny fanondranana ny mosara, ny taova amin'ny tarehy, ny lamban-taratasy, ary ny mosara taratasy dia nampiseho fironana ny fihenan'ny volany sy ny vidiny.
Etazonia dia iray amin'ireo mpanondrana lehibe ny vokatra taratasim-pianakavian'i Shina. Hatramin'ny ady raharaham-barotra tany Etazonia-Etazonia, dia nihena be ny habetsaky ny taratasim-pianakaviana nafarana avy tany Shina nankany Etazonia. Ny totalin'ny taratasim-pianakaviana aondrana any Etazonia amin'ny taona 2020 dia manodidina ny 132 400 taonina, izay avo kokoa noho izany. Amin'ny taona 2019, fiakarana kely 10959.944t. Taratasy fisokafan-tsakafo aondrana any Etazonia amin'ny taona 2020 dia nahitana 15,20% tamin'ny fanondranana tisu any Sina (15,59% amin'ny totalin'ny fanondranana tamin'ny taona 2019 ary 21% ny totalin'ny fanondranana tamin'ny taona 2018), laharana fahatelo amin'ny volan'ny fanondranana.
Tamin'ny taona 2020, ny totalim-bidin'ny vokatra avy amin'ny fidiovana voadio dia 136 400 taonina, fihenan'ny 27,71% isan-taona. Nanomboka ny taona 2018 dia nitohy nihena. Tamin'ny taona 2018 sy 2019, dia 16,71% sy 11,10% ny totalin'ny fanafarana rehetra. Ireo vokatra nafarana dia mbola anjakan'ny vodin-jaza, mitentina 85,38% amin'ny habetsahan'ny fanafarana rehetra. Ho fanampin'izay, ny habetsahan'ny fanafarana napkin / fidiovana madio sy vokatra tampon dia nidina voalohany tao anatin'ny telo taona lasa, nihena 1,77% isan-taona. Ny haben'ny fanafarana dia kely, fa ny habetsahan'ny fanafarana sy ny sandan'ny import dia nitombo.
Ny habetsahan'ny fanafarana vokatra ara-pahasalamana mitroka dia nidina bebe kokoa, mampiseho fa ny diapia vokarin'ny vokatra any an-toerana any Shina, ny vokatra fidiovana ary ny indostrian'ny vokatra fanadiovan-tsakafo hafa dia nivelatra haingana, izay afaka mamaly ny filan'ny mpanjifa an-trano. Ho fanampin'izay, ny fanafarana vokatra ara-pahadiovana mitroka dia mazàna mampiseho ny firoboroboan'ny haavon'ny sandam-bola sy ny fiakaran'ny vidim-piainana.
Na dia tratry ny valan'aretina aza ny indostria dia hitombo hatrany ny habetsahan'ny fanondranana vokatra ara-pahadiovan-tseranana amin'ny taona 2020, miakatra 7,74% isan-taona ka hatramin'ny 947 900 taonina, ary ny vidin'ny vokatra eo koa dia somary nisondrotra ihany koa. Ny fanondranana ankapobeny ny vokatra madiodio mpitroka dia mbola mampiseho fironana fitomboana somary tsara.
Ny vokatra tsy fihinanan'ny olon-dehibe (ao anatin'izany ny pad pet) dia 53,31% amin'ny totalin'ny fanondranana. Arahin'ireo vokatra diaper zaza, mitentina 35,19% amin'ny totalin'ny fanondranana, ny toerana itondrana entana ho an'ny zaza indrindra dia ny Filipina, Australia, Vietnam ary ny tsena hafa.
Voakasiky ny valan'aretina, nirongatra ny fangatahan'ny mpanjifa ny vokatra fanadiovana manokana, ary ny fanafarana sy fanondranana ireo vokatra famaohana lena dia nampiseho fironana miakatra ny vidiny sy ny vidiny.
Tamin'ny taona 2020, ny habetsahan'ny fanafarana safo-drano lena dia nihena avy amin'ny fihenan'ny taona 2018 sy 2019 ka nitombo 10,93%. Ny fiovana amin'ny habetsaky ny famafana lena amin'ny lena amin'ny taona 2018 sy 2019 dia -27,52% ary -4,91%. Ny habetsaky ny volan'ny solo-drano mamafa amin'ny taona 2020 dia 8811.231t, fitomboan'ny 868.3t raha oharina amin'ny 2019.
Tamin'ny taona 2020, ny habetsaky ny fanondranana vokatra voafafa lena dia nitombo 131,42%, ary ny sandan'ny fanondranana dia nitombo 145,56%, izay nitombo roa heny. Hita izany fa noho ny fiparitahan'ny valan'aretina pnemonia satro-boninahitra vaovao any amin'ny tsena ampitan-dranomasina, dia misy ny filàna bebe kokoa amin'ny vokatra famaohana lena. Ireo vokatra famaohana lena dia aondrana any amin'ny tsenan'i Etazonia amin'ny ankapobeny, mahatratra 267.300 taonina, mitentina 46,62% ny totalin'ny fanondranana. Raha ampitahaina amin'ny habetsaky ny solo-drano lena aondrana any amin'ny tsenan'i Etazonia tamin'ny taona 2019, dia nahatratra 70.600 taonina ny totalin'ny vokatra famaohana lena, fiakarana 378,69% tamin'ny taona 2020.